Interview with डी. आर.
साहित्यको रस भिजेको मात्र हो - डी. आर.
इलामलाई जन्मथलो बनाएर काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाएका साहित्यकार डी. आर.ले भर्खरैमात्र नियात्रासंग्रह कान्तिपुरदेखि सन्दकपुरसम्म बजारमा ल्याएका छन् । यसअघि उनी विशेषतः गीतकारको पहिचानमा थिए । नियात्रासंग्रह प्रकाशनमा ल्याउनुअघि मात्रै पनि उनले गीति अल्बम यादमा बजारमा ल्याए । साहित्यबिनाको जीवन खल्लो लाग्ने डी. आर. को भनाइ छ । पेसाले फोटो व्यवसायीसमेत रहेका डी. आर. सँग गरिएको इमेल-वार्ताः
कृति त लगातार प्रकाशनमा ल्याउन थाल्नुभयो, साहित्यमा रस भिजेजस्तो छ ? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
लगातार या खै के भनौं कृतिचाहिँ फाट्टफुट्ट निकाल्दै छु । २०५९ सालमा आधुनिक गीति एल्बम वाचा, २०६३ सालमा गीतसंग्रह नयाँ मोडहरूमा २०६५ सालमा गीति एल्बम यादमा र २०६६ सालमा यात्रा संस्मरण निकालिसकेको छु । आफूले सकेजति, जानेजति समयानुकूल लेख्ने हो । वास्तवमा तपाइँले नै भनेझैं साहित्यमा रस भिजेको मात्र हो । अलिअलि भिजेको सुक्न पनि त सक्छ । तर, गहिराइमा पुग्नुचाहिँ अर्कै कुरा हुन सक्छ ।
फोटो व्यवसायी मान्छे कताबाट लेखनमा लाग्नुभयो नि ?
अरू व्यवसायभन्दा भिन्न प्रकारको यो फोटोग्राफीमा पनि सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । साहित्य लेखनमा जस्तै फोटोमा पनि केही जटिलता, गम्भीरताका साथै सिर्जनाको अथाह सागर हुन्छ । त्यसकारण मेरो जीवनको आरोह-अवरोहमा बचे-खुचेका समयलाई साहित्य सिर्जनामा खर्चेको छु । साहित्यमा नै लागिपरेको भने छैन ।
अन्य साहित्यकारका माझ आफ्नो कृति कुन स्तरमा पाउनुभयो ?
मेरो यो कान्तिपुरदेखि सन्दकपुरसम्म भन्ने यात्रा संस्मरण भरखरैमात्र पाठकमाझ पुग्दैछ । कस्तो प्रतिक्रिया आउने हुन्, सुन्न बाँकी नै छ, अनिमात्र यो कृतिको स्तर थाहा लाग्ला । यो जिम्मा यहाँहरूलाई नै...।
तपाइँको बुझाइमा साहित्य के रहेछ त ?
मेरो बुझाइमा साहित्य-म एउटा मान्छे, तर मभित्र पनि अर्को मान्छे छ । त्यो भित्री मान्छेको जिउने सम्बन्ध कस्तो छ । त्यसैमा भरपर्ने कुरो हो । त्यसैले मेरो विचारमा बिनासाहित्यको जीवन खल्लो हुन्छजस्तो लाग्छ । तर, अरुलाई नहुन पनि सक्छ ।
दिनभर फोटो व्यवसाय, कति बेला लेख्नुहुन्छ ?
हो, म दिनभर मेरो आफ्नो पेशाप्रति आनन्द लिन्छु । मेरो कर्मथलोलाई मन्दिर सम्झी म दिनभर ग्राहकको सेवामा जुटिरहन्छु अनि कहिलेकाहीँ बिहान-रातिको छिटफुट समयलाई साहित्य सिर्जनामा पोखिदिन्छु, बस ।
अडियो अल्बमबाट त राम्रै चर्चा पाउनुभयो नि ? कस्तो छ सांगीतिक बजार ?
यादमा एल्बमका गीतहरुले सोचेभन्दा राम्रो चर्चा पाएको छ । बिक्रीमा भने चित्त बुझाउने ठाउँ छैन ।
गीतकारले लगानी गर्न त गाह्रो छ भन्छन्, तपाइँलाई चाहिँ गाह्रो परेन ?
गीतकारले लगानी गरेर एल्बम निकाल्नु चानचुने कुरा होइन । यद्यपि, मैले चाहिँ यो यादमा एल्बममार्फत एउटा सम्भावना बोकेको नयाँ र युवा गायकलाई सांगीतिक उचाइमा पुर्‍याउन हरक्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गरेको छु । अहिले आएर सन्तुष्टि पनि पाएको महसुस भएको छ । मेरो पलपल बोलको गीत राम्रो हुनुमा संगीतकार राम सिटौलाको योगदान छ भने नवगायक लोकेन्द्र राईको बुलन्द आवाजमा जादू नै भएसरि छ । त्यसैले यो गीत माथि उठ्न सफल भएको छ ।
Views : 2431 | Date : 0000-00-00